Teknolojia vaovao :: Miroso amin’ny raitra hatrany ireo mpikatroka lalao an-tsolosaina • AoRaha
Teknolojia vaovao Miroso amin’ny raitra hatrany ireo mpikatroka lalao an-tsolosaina
Miha mivoatra ny teknolojia amin’ny lalao an-tsolosaina tonga eto amintsika. Maharaka ny mpankafy an’io sehatra iray io eto Madagasikara. Efa afaka mitaha sy mihoatra lavitra amin’ny lalao sy fanatanjahantena isan-karazany aza ireo lalao an-tsolosaina, raha ny fankafizan’ny tanora azy. Tsy latsa-danja amin’ny fanarahana ny fivoarana noho izany ireo mpikatroka malagasy, araka ny nambaran’i Patrick Andrianony, tompon’andraikitry ny trano PC Upgrade, nandritra ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny toeram-pivarotana vaovaon’izy ireo tetsy Manakambahiny, tamin’ny sabotsy lasa teo.
Mahatratra hatrany amin’ny 30 tapitrisa ariary ny vidin’ny solosaina iray afaka hikirakirana an’ireo lalao samihafa ireo, arakaraky ny ilàna azy. Ifanotofan’ireo tanora malagasy anefa ireo solosaina izay mahazaka ny karazan-dalao raitra sy hiaka farany.
« Mandroso tokoa ny lalao an-tsolosaina ankehitriny. Amin’ny ankapobeny dia ireo mpilalao no tena manjifa azy. Efa tamin’ny iray maraina, ohatra, no nisy olona nilahatra hanjifa ny tolotra vaovao. Ireo solosaina matanjaka sy mahazaka lalao hiaka farany no tena be mpanontany indrindra», hoy ihany ny tompon’andraikitry ny PC Upgrade.
Maro ireo tanora malagasy no nifaninana amin’ireo lalao an-tsolosaina. Ankoatra ny ao amin’ny tranokalam-pifandraisana, misy ireo nifaninana any ampitan-dranomasina any. Efa nandrombaka ny amboara mihitsy aza ny sasany. Misy ny hetsika mandeha amin’ity sehatra iray ity amin’izao fotoana izao.
Ambatondrazaka :: Lehilahy lehibe maty voadonan’ny kibôta
Fahatongavan’ny Papa François :: Enina hetsy ireo mpino katolika nisoratra anarana ho avy eto Iarivo